Ikhala - sekuyahwalala sibalo ezibaluleke kakhulu ubuso bethu. Lokhu "into" njalo uku spotlight, ukuze abantu bavame ukunikeza ukubonakala ekhaleni isikhathi esiningi. Futhi-ke, kubaluleke kakhulu ukuba siqhubeke ekhaleni lakho ukuze okuhle nokwengamela impilo yayo nokuhlanzeka.
Yilokho nje kokubuka ngaphandle kwe ekhaleni, ngezinye izikhathi, futhi kungase kube nezinkinga ezithile. Iqiniso lokuthi uboya ekhaleni atholakala abantu abaningi, futhi enzelwe ukuvikela ulwelwesi ezondile ukudlula kwangaphakathi kuleli ekhaleni. Ngandlela-thile, la izinwele abasakwazi ewusizo empilweni yomuntu wonkana, njengoba ukuvimbela uthuli angangeni nasopharynx amagciwane ayingozi futhi enenhlabathi. Ngaphezu kwalokho, izinwele akukuniki umswakama shabalala kusukela ekhaleni, futhi ngakho-ke egcinwa amavesi acinene.
Kungani, kulesi simo, uboya ekhaleni nge isikhathi ekuqaleni ukukhula, futhi ubude bawo bangase babe ngisho kangangokuthi zibonakala abanye olubi ngabanye? Isizathu salokhu kuba phambi emzimbeni we-estrogen hormone. Mangisho ukuthi le hormone ukhiqiza abesilisa umzimba female. Nokho, ukuguga, umzimba yeduna iqala ukukhiqiza kancane le-hormone, ngakho izinwele uqala zikhule ngokushesha futhi babe ezimaholoholo e oyiyo. Cishe, izinselele ezinjalo ebhekene kuba ubulili besilisa.
Ngakho-ke, lapho izinwele uzoqala uphume ekhaleni ngaphandle ke kubalulekile ukuba sithathe izinyathelo esiphuthumayo ukuze uwasuse. Ngakho, indlela ukususa uboya ekhaleni? Ngomqondo onabile, bangaba nje futhi ngobumnene ukuyikhipha nge udlawana. Nokho, le ndlela kuyinto kugcine ngokuba buhlungu kodwa futhi kuyingozi empilweni yakho. Iqiniso ukuthi ejection izinwele ekhaleni endaweni yayo mikroranki kwakhiwa, okuyinto kalula ukufinyelela amagciwane ahlukahlukene abangela izifo futhi abangele engathandeki isifo uhlobo meningitis noma sinusitis. Ngakho-ke, ukususa izinwele Sine ezinye izindlela.
Ngomqondo onabile, inkulumo sikelo ekhaleni izinwele, ungavele ukusika. Le nqubo ngokuphelele kobuhlungu, futhi kuthatha isikhathi hhayi okungaka. Ngaphambi ukusoka izinwele acinene ingaphakathi, ke Kunconywa okuhlanzekile ezinhle kusukela slime nokungcola zokukhipha igciwane sikelo ngokwabo Cologne. Manje kufanele ufake ngokucophelela sikelo kwelinye ikhala futhi baqala izinwele, ukunakekela ilimaze ulwelwesi.
Uma uboya ekhaleni ezikhulayo ngokushesha futhi selande laze laba inkinga yangempela, kubalulekile ukuya esitolo uthenge idivayisi elikhethekile okuthiwa i kusilungisi ukususa izinwele. Kuyinto ithuluzi omuhle elula, ikakhulu njengoba kunokucindezela manje inani elikhulu onobuhle ngombala. Njengoba isisho sibonisa, yonke ukunambitheka nombala.
Indlela ukususa uboya ekhaleni nge kusilungisi? Kulokhu-ke kubalulekile ukuba ukhumbule ukuthi udinga ukususa kuphela labo yizinwele kakade ngaphuma. Kodwa kule faka ekhaleni abakwazi Ukunquma kakhulu. Lapho inqubo ukususwa kuqedile, idivayisi kumele kuqalwe ngokubulala isikhunta ngokuphelele.
Ngaleso sikhathi samanje ukuthenga kusilungisi akunzima. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi kuyinto efiselekayo ukuthenga kuphela umshini eliphezulu kusuka abakhiqizi odumile emhlabeni, kunokuba "ukubanjwa" phezu ezishibhile elinegazi Chinese.
Uma ungumnikazi inqubo enjalo, kwabanye isizathu esingesihle, ungalethemba impumulo yakho ochwepheshe abavela salon ubuhle. Kulesi ingaphakathi Uchwepheshe depilation usebenzisa epilator, ukhilimu noma laser ungagcina esigulini phakathi lezi izinwele. Futhi ukhule ngeke isikhathi eside impela.
Nokho, ukusetshenziswa okhilimu ezifana kuwumsebenzi ngempela ezingemnandi, ngoba chemical yabo Ukwakheka ukwazi kalula vimbela umoya womuntu. Futhi ukhilimu kwabanye abantu kungaba allergen eqinile. Laser hair ukususwa ungaphakathi nokucwala izobiza ezibizayo kakhulu ngaphezulu. Kodwa umphumela kuyoba enkulu.
Erythrasma. Ukulapha nokuvikela
Eye lehla komzimba
Impilo yabakhulu eGibhithe lasendulo. Izindlu idivayisi iphinde zomphakathi yemfanelo ezicukuthwaneni
Ukuba abe nombono omuhle kanjani